Caadooyinka subaxda ee guusha leh: 7 sheeko oo dhiirigelin leh
Sherri waxay si gaar ah u siisaa jimicsiyada subaxda waxayna aadaa ciyaaraha ugu yaraan afar jeer todobaadkii. Sida laga soo xigtay iyada, dhaqdhaqaaqa jireed waa in loola dhaqmaa si mas'uuliyad leh sida shirarka ganacsiga muhiimka ah, oo aan la seegin kiis kasta.
Dabcan, waxaa jira xaalado aan la filayn oo kugu qasbaya inaad dib u dhigto tababarka asalka, laakiin tani maaha sabab aad naftaada u canaanato. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad isku daydo inaad ku noqoto nidaamka oo aad ilaaliso ugu yaraan laba toddobaad. Isla markiiba, waxaad ogaan doontaa sida niyaddaadu u soo hagaagayso iyo wax soo saarkaagu u fiicnaado.
Ed waxa uu ka baqayaa in uu si badheedh ah u toosiyo xaaskiisa, sidaa awgeed waxa uu ku xidhay giraanta digniintiisa. Isla markii uu kii hore dhawaaqayba, isla markiiba wuu toosay oo daminayaa. Kahor jimicsiga subaxnimadiisa, Ed runtii wuu fikiri doonaa 30-60 daqiiqo.
Had iyo jeer waa nooc ka mid ah vipassana. Tusaale ahaan, diiradda saaraya neefsashada. Ed wuxuu la wadaagaa inuu ka faa'iidaystay awoodda uu ku demiyo codkiisa gudaha.
Waxaan xaqiiqsaday in codkani aanu ahayn aniga oo dhan oo aanan u baahnayn in aan si joogto ah u falanqeeyo dhacdooyinkii hore, ama aan aad uga fikiro mustaqbalka. Aqoontaasina waxa ay iga caawisay in aan diiradda saaro oo aan hakad ka galo ka hor inta aanan ka falcelin dhacdooyinka lama filaanka ah.
Saacada digniinta ugu fiican ee Biz, wiilkiisa shan jirka ah. Subax walba wuxuu u yimaadaa aabbihiis, wayna wada ciyaaraan. Waxayna tani dhaqan ahayd dhowr sano. Waqtigan xaadirka ah ma jirto meel talefan ah. Biz wuxuu ka tagayaa taleefanka casriga ah maalin ka hor albaabka hore si uusan u iloobin jidka shaqada.
Hadii aanan subixii fursad u helin in aan wiilkayga la ciyaaro,waxa aan dareemaa in aan seegay wax muhiim ah oo aanan waligay soo laaban. Waa farxad sidaan oo kale in aad toosto oo aad noqoto shan jir ka hor inta aanad qaadin door hoggaamineed.
El aad bay u fiirsataa riyooyinkeeda. Subax kasta, iyadoo u dhaxaysa xaaladda hurdada iyo soo jeedka, waxay ku duubtaa riyooyinkeeda dictaphone waxayna isla markiiba la wadaagtaa dareenka wixii ay aragtay. El wuxuu ku kalsoon yahay in sawiradan iyo shirqooladan ay ka kooban yihiin tilmaamo iyo tilmaamo lagu fahmo waxa runtii nagu dhacaya.
Gabadhu uma jeedsato buugaagta riyooyinka, waxay sheegtay in tafsiirkeena ay aad uga muhiimsan yihiin. Quraacda ka dib, El wuxuu sii wadaa inuu qoro madax madhan, saddex bog oo fikrado gacan ku qoran. Wax kasta waxaa lagu qori karaa warqad, sababtoo ah waxaa loogu talagalay oo kaliya indhahaaga.
Ku celcelinta boggaga subaxda waxay la mid tahay sagxadaha xaaqida, ka dib waxa ay dareema fiicnaan.
Ku dhawaad ​​subax kasta, cimilo kasta, Austin iyo xaaskiisa ayaa labadooda wiil ku dhejiyay gaadhi laba jibbaaran oo casaan ah oo ay ku socdaan socod shan kiiloomitir ah oo xaafadda ah. Waxa uu qiray in tani ay inta badan aad u adag tahay, mararka qaarkoodna ay u baahan tahay dadaal weyn, laakiin aad ayey muhiim ugu tahay maalinta xigta.
Taasi waa marka aan helno fikrado xiiso leh. Waa marka aynu qorshayno, u kuur-galno duurjoogta xaafaddeenna, siyaasadda ka hadalno, shaydaankana ka saarno.
Austin ku dhawaad ​​waligiis ma sameeyo ballamaha subaxda ama uma safro waraysiyada subaxda, isaga oo waqti ku qaadata inuu qoyskiisa la baxo.
Jeff wuxuu kacay saacadda toddobaad wuxuuna cabbay saddex koob oo biyo ah daqiiqadihii ugu horreeyay ka dib markii uu soo toosay. Waxa uu ku andacoonayaa in tani ay tahay waxa u ogolaanaya jidhka iyo maskaxda in la toosiyo. Dabadeed wuu fidiyay oo orday 10 kiiloomitir, ka dibna qubays, quraac iyo shaqo.
Jeff wuxuu hurdaa ugu yaraan 9 saacadood. Isaga laftiisa ayaa sheegay in tani ay aad u badan tahay, laakiin ma doonayo inuu ka tago habkiisa. Quraacda, waxa uu isticmaalaa mid ka mid ah afarta nooc ee boorashka: miro aan la farsamayn, daqiiq aan sal lahayn, badarka, ama isku dhafka boorashka iyo sarreenka. Dhammaan badarka waxaa lagu kariyaa caano aan la karinin, oo aan biyo lagu karin.
Laakiin qaybta ugu muhiimsan ee subaxdii waa samaynta liiska wax-qabadka ee maalinta, Jeff wuxuu isla markiiba tilmaamayaa qodobbada ugu muhiimsan uguna adag wuxuuna bilaabay shaqadiisa marka hore.
Rebecca had iyo jeer waxay qorshaysaa maalinta xigta ka hor intaanay seexan. Ganacsade guri ku salaysan, waa inay samayso go'aamo yaryar oo badan maalin kasta. Waxay ogaatay inay qorsheynayso inay aad ugu fiican tahay iska ilaalinta daalka subaxda xigta.
Waxay isticmaashaa habkan ma aha oo kaliya shaqada, laakiin sidoo kale ciyaaraha. Tusaale ahaan, haddii jimicsi hore loo qorsheeyay, markaa dharka isboortiga ayaa la diyaarin doonaa fiidkii. Haddii mid ka mid ah caadooyinka subaxdii la jebiyo, Rebecca waxa laga yaabaa inay dareento in yar oo kala firdhisan. Laakin waxa ay dhiirigelisaa in la xidho oo wax walba si sax ah loo sameeyo subaxa xiga: goor hore oo aad soo toosto, koob biyo ah, ciyaaraha, quraacda iyo qorshaynta.
Sida laga soo xigtay buuga Morning Rituals. Sida ay dadku u bilaabaan maalintooda. Iyada, waxaad ku ogaan kartaa sida loo bilaabo maalintaada oo aad u sameyso caadooyin cusub oo kaa caawin doona inaad koraan. Saacadda ugu horreysa ka dib markaad toosto, aasaaska ay ku taagan tahay maalinta oo dhan. Xasuusnoow, uma shaqaynaysid caadooyinka ee adiga ayay kuu shaqaynayaan.
Xudunta buuggan waxa ku jira in ka badan 300 oo waraysiyo subaxnimo ah. Intaa waxa dheer, waxa ay ka kooban tahay 64 wada-sheekaysi oo lala yeeshay dad badan oo guulo kala duwan ka soo jeeda, laga soo bilaabo General Ciidanka Maraykanka ee hawlgabka ah ilaa saddex jeer ku guuleystay dabaasha Olombikada.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Caadooyinka subaxda ee guusha leh: 7 sheeko oo dhiirigelin leh!